Fijery teknisianina kosa no arosoko, fivangongoan'ny fahefana sy ny andraikitra eto amin'ny fitondrana foibe, ka dia miandry ny mpitondra aty amin'ny foibe ny rehetra vao mihetsika, ny vola rahateo giazin'ny foibe avokoa ny 98%.
Tsy mahagaga raha tsy misy fanamboarana, fanaraha-maso ireny fotodrafitrasa manerana ny Nosy ireny, ka vao rano kely sy orana kely mikija dia efa sempotra ny fotodrafitrasa rehetra.
Hanadio tatatra, dia iandrasana ny famatsiam-bola avy amin'ny foibe, anamboatra ny fefiloha sy barazy, dia mbola andrasana ministera, sy famatsiana vola avy any ivelany.
Anadio tanàna, andrasana ny securité civile na polisy mirobo-drano manala ny fako, dia ny mponina manodidina mpanary fako an-tatatra mijery ety ivelany fotsiny.
Toy ny Tanamaro mandoko sekoly ihany io, ny mpianatra sy Ray amandrenin'ny mpianatra tsy misy mandray anjara, fa ny minisitra sy ny mpiasa avy aty amin'ny foibe no mamokovoko manadio sy mandoko ny toeram-pianarana, ny mpaka sary manaraka eny hatrany, hilazana fa miasa ny foibe.
Orana kely ireny mitranga ireny, fa tsy mbola rivodoza matanjaka akory dia efa miondrika sy mandohalika ny fotodrafitrasa rehetra satria tsy misy fikojakojana.
Ka mbola iandry ny Foibe daholo ?
Omeo ny mponina amin'ny faritra no hintatana ny hareny sy ny fampandrosoana ao aminy, dia ho hita eo izay tsy mandray andraikitra, tsy afaka hanilika amin'ny mpitondra teo aloha intsony.
Ny rivodoza sy ranon'orana hisy foana, ary mbola hisy, tsy azo ialana izay, fa raha samy mandray andraikitra isan'andro mialoha ny fotoam-pahavaratra, dia mba kely sy voafehy ny fahasimbana sy voka-dratsy aterany.